Ingabe i-Fitbit yami ilandelela i-Cycling - BikeHike
Ingabe i-Fitbit yami ilandelela i-Cycling
Ingabe i-Fitbit ilungele ukuhamba ngebhayisikili?
Ngiyengeza kanjani ibhayisikili ku-Fitbit yami?
Yiziphi izinhlelo zokusebenza zamabhayisikili ezisebenza neFitbit?
I-Fitbit ililandela kanjani ibhayisikili langaphandle?
Ingabe i-Fitbit Charge 4 ilandelela ngokuzenzakalelayo ukuhamba kwamabhayisikili?
Ngikulandelela kanjani ukuhamba ngebhayisikili ku-Fitbit Charge 3 yami?
Ngingalilandela kanjani ibhayisikili lami?
Kungani uFitbit engabali ukuhamba ngebhayisikili njengezinyathelo?
Uwalandela kanjani amakhilomitha ngebhayisikili elijikelezayo?
Ingabe i-fitbit ivumelanisa ne-peloton?
UFitbit wazi kanjani ukuthi ugibele ibhayisikili?
Ingabe i-Fitbit 4 ingasetshenziselwa ukuhamba ngebhayisikili?
Ngiyengeza kanjani ibhayisikili ku-Fitbit Charge 4 yami?
Ngililandelela kanjani ibhayisikili lami elimile ku-Fitbit Charge 4 yami?
Ingabe i-Fitbit Charge 3 iyakubona ukuhamba ngebhayisikili?
Ngikumisa kanjani ukuhamba ngebhayisikili ku-Fitbit Charge 3 yami?
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kufana nokuhamba ngezinyawo?
Ngingakwazi kanjani ukulandelela ibhayisikili lami efonini yami?
Iyiphi i-GPS tracker engcono kakhulu yebhayisikili?
Ingabe amabhayisikili anazo ama-tracker?
Yebo, ama-Fitbits angakwazi ukulandelela ukugibela kwakho ibhayisikili esebenzisa ubuchwepheshe obubizwa ngokuthi i-SmartTrack futhi awusizo kakhulu kubagibeli bamabhayisikili ngezindlela eziningi. Isici esisodwa esihlukile semikhiqizo eminingi ye-Fitbit, ebonakale ibalulekile ekuhambeni kwamabhayisikili, ukuhlanganiswa kwe-GPS nokusebenza.
I-Fitbit Charge 4: I-tracker yokufaneleka ehamba phambili yokuhamba ngebhayisikili Lokho kusho ukuthi ungakwazi ukushiya ifoni yakho ekhaya uma ufuna ukuthatha Imali yokugibela ibhayisikili. Kanye nedatha evamile yokushaya kwenhliziyo, i-Charge 4 futhi ingumbukiso wokuqala we-metric yokufaneleka entsha ye-Fitbit - Active Zone Minutes.
Kudeshibhodi yohlelo lokusebenza lwe-Fitbit thepha i-Exercise tile ukuze uvule umlando wakho wokuzivocavoca. Leli ithayela elithi “Landelela ukujima” uma ungakasebenzi namuhla. Thepha isithonjana sesitophuwashi ekhoneni eliphezulu kwesokudla. Thinta Ilogi. Thepha umsebenzi wakamuva noma sesha uhlobo lokuzivocavoca. Lungisa imininingwane yomsebenzi bese ucindezela u-Engeza.
Izinhlelo zokusebenza eziphezulu eziyi-10 zokuthola okuningi ku-Fitbit Strava yakho. I-Strava ihambisana kahle namadivayisi amaningi asekelwe ku-GPS, kodwa futhi iwuhlelo lokusebenza oluqinile lwabalandeleli bokufaneleka futhi. Imephu Ukugijima Kwami. Umngane Wami Wokufaneleka. Fitstar Personal Trainer. I-Thermo's Hydration App. Ilahlekile! Thola i-Fitbit yami. I-Fitabase.
Iqiniso ku-Fitbit Surge, i-GPS yokulandelela ibhayisikili nezinye izinzwa ezithuthukisiwe kudivayisi ukuvumela abagibeli ukuthi babone ibanga, ubude besikhathi, isivinini esimaphakathi, ukushaya kwenhliziyo, amakholori ashisiwe kanye nesikhathi; izibalo zivumelaniswa ngokuzenzakalelayo ngaphandle kwentambo kudeshibhodi yohlelo lokusebenza lwe-Fitbit ukuze ubuyekeze imizila, isivinini nokuphakama ngemininingwane eyengeziwe.
Ngokuzenzakalelayo imidlalo elandelwa yi-Charge 4 ihlanganisa ukugijima (GPS), ukuhamba ngebhayisikili (GPS), ukubhukuda, i-treadmill, ukujima kwangaphandle (GPS) nokuhamba ngezinyawo (GPS). Lokho kungenxa yokuthi i-Charge 4 ingabamba izinqamuleli eziyisithupha kuphela ezindleleni zokujima kudivayisi uqobo.
Ngine-Charge 3, futhi indlela ofinyelela ngayo Ibhayisikili yilena: Vula uhlelo lokusebenza bese uthepha i-avatar yakho (phezulu kwesokunxele; kungaba ubuso bakho) Lokhu kukuyisa ekhasini le-Akhawunti yakho; thola idivayisi yakho ngezansi (Shaja 3) bese uthinta kuyo. Lapha kulapho ungakwazi, isibonelo, ukukhetha ubuso bewashi; skrolela phansi kokuthi Sebenzisa Izinqamuleli; cindezela kuyo.
I-Bike GPS tracker ingasetshenziselwa noma yimaphi amasondo amasondo angu-2 njenge-scooty/scooter njll. Umqondo obalulekile wesistimu yokulandela imoto ye-Lettrack ukuqinisekisa ukuphepha kwawo wonke amakhasimende ayo. Uhlelo lokusebenza lokulandelela i-GPS lwebhayisikili kufanele lufakwe umuntu ozolandelela futhi aqaphe indawo yomuntu othintekayo.
Ngeshwa, i-Apple Watch, iFitbit, nezinye iziqaphi zemisebenzi azithathi izinyathelo ezihambisanayo zokuhamba ngebhayisikili. Lokhu kungenxa yokuthi iziqaphi zomsebenzi ezifana ne-Apple Watch, Fitbit, Garmin, ne-Xiaomi Mi Band izinyathelo zokubala ezisuselwe ekunyakazeni kwengalo. Ingalo yakho ayinyakazi ngenkathi ugibele ibhayisikili.
Ukuze ulandelele amabhayisikili asendlini kudivayisi yakho, hamba kokuthi “Zivocavoce” bese ukhetha “Ukuphotha”. Bese, cindezela isikhathi eside isinqamuleli ukuze uqale futhi uthephe kuso uma usuqedile. I-FitBit izorekhoda yonke idatha ehlobene nokushaya kwenhliziyo yakho, isivinini, amakhalori ashisiwe, nobude besikhathi.
Manje usungakwazi ukwabelana ngamamethrikhi asuka ku-Peloton ogibele ngokuzenzakalelayo aye ku-akhawunti yakho ye-Fitbit isikhathi ngasinye lapho uqeda ukugibela. Xhuma i-akhawunti yakho ye-Peloton ne-Fitbit ukuze ubuke amamethrikhi e-Peloton njengobude bokujima, ibanga elihanjiwe nama-calories ashiswe kudeshibhodi yakho ye-Fitbit.
I-Fitbit isebenzisa idatha yakho yomsebenzi kanye ne-Basal Metabolic Rate (BMR) ngokuhlangana ukuze ilinganisele amakhalori akho ashiswe phakathi neseshini. Ikhono lokulinganisa ukushuba kokujima kwakho nemisebenzi ngokuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo yakho libalulekile kubagibeli bamabhayisikili abaningi.
I-Fitbit Charge 4 iwashi lokuzivocavoca lanoma ngubani ozibheka 'esebenzayo', hhayi nje abagibeli bamabhayisikili.
Kuhlelo lwakho lokusebenza lwefoni: Thepha esithombeni sakho sephrofayela, bese u-Charge 4 yakho. Skrolela phansi kokuthi Zilolonge Izinqamuleli. Thepha okuthi Hlela phezulu kwesokudla bese ususa isinqamuleli ongasidingi. Manje Isinqamuleli + Sokuzivocavoca sizoba luhlaza okwesibhakabhaka. Thepha okuthi + Isinqamuleli Sokuzivocavoca bese wengeza i-elliptical.
Ukuze ulandelele amaseshini akho okugibela amabhayisikili asendlini ku-Fitbit yakho, vele uye ekuzilolongeni bese uswayipha kanye nemisebenzi uze ufike ekujikeni. Okufanele ukwenze nje ukuyicindezela ukuze uqale ukuqopha futhi ukuyicindezela futhi ukuyimisa uma usuqedile. Kulula!Jul 4, 2021.
I-Fitbit Charge 3 ilungele ukuhamba ngebhayisikili nokunye okuningi. Ngezindlela zayo zokuzilolonga ezakhelwe ngaphakathi, ukutholwa kokuzivocavoca kwe-SmartTrack, neqapha lenhliziyo, i-Fitbit Charge 3 iyisilandeleli sokufaneleka esiphelele sokuhamba ngebhayisikili, kungakhathaliseki ukuthi isendleleni noma ekilasini lokujikeleza.
Nansi indlela: Vula uhlelo lokusebenza lwe-Fitbit. Thepha isithonjana ekhoneni eliphezulu kwesokudla ukuze ufinyelele izilungiselelo ze-akhawunti yakho. Thepha kokuthi Charge 3 ohlwini lwamadivayisi. Skrolela phansi kokuthi “Sebenzisa Izinqamuleli” bese uyithephe.
Ukuhamba ngebhayisikili kusebenza kahle kakhulu kunokuhamba, ngakho-ke uzosebenza kanzima ngokuhamba ngokushesha futhi mhlawumbe usebenzise inhliziyo yakho, amaphaphu nemisipha emikhulu kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ukuhamba ngebhayisikili cishe akunzima kangako ezinqulwini, emadolweni nasemaqakaleni kunokuhamba.
Thola izibalo zesikhathi sangempela Efonini yakho, vula uhlelo lokusebenza lwe-Google Fit . Thepha okuthi Engeza ukujima kwethrekhi . Ukuze ukhethe umsebenzi osuzowuqala, thepha umcibisholo othi Phansi . Thepha okuthi Qala ukujima. Uma ugibele ibhayisikili, phatha ifoni yakho ephaketheni lakho. Ukulandelela kuzoba nembe kakhulu kunalapho ifoni yakho ifakwe noma isesikhwameni.
I-GPS tracker ehamba phambili yezimoto namabhayisikili e-India Onelap Micro - I-Hidden Waterproof GPS Tracker. I-Autowiz Obd GPS Car Tracker. USGlobalSat USB GPS Receiver. I-Acumen Tracker UC 900 GPS Tracker. I-Lamrod Supreme Google Link GT02A GPS Tracker. I-Akari Gt02A GPS Tracker Device. I-Zaicus ST-901 Ibhethri Eyakhelwe Ngaphakathi Yebhethri ye-GSM GPS.
Kunezinhlobo ezahlukene zama-trackers e-GPS atholakalayo emakethe akusiza ukuthi ulandelele indawo yebhayisikili lakho. Abanye abahlinzeki besevisi ye-GPS banikeza izinketho ezengeziwe ezithuthukisiwe zokuvula ukunyakaza kanye nokulandela ngokushesha indawo yesikhathi sangempela esiza kakhulu uma kwenzeka ibhayisikili lakho lintshontshwa noma lilahlekile.
Ingabe i-Fitbit Charge Track Cycling
Umbuzo: Ingabe i-Fitbit Charge 3 Track Cycling
Ingabe i-Fitbit Charge 3 Track Cycling
Umbuzo: Can My Fitbit Charge 2 Track Cycling
Ingabe I-Fitbit Yami Iyashaja Hr Ilandelela Ukuhamba Ngebhayisikili
Ingabe i-Fitbit Charge 2 Track Cycling
Ingabe i-Fitbit Track Cycling
Ungakwazi yini Ukulandela Ukuhamba Ngebhayisikili Ku-Fitbit Charge 2
Ungakulandela Kanjani Ukuhamba Ngebhayisikili Ku-Fitbit Charge 2
Impendulo Esheshayo: Ingabe i-Fitbit Charge Track Bicycle Riding
Ingabe i-Fitbit Charge Track Bike Riding
Impendulo Esheshayo: Ingabe i-Fitbit Charge Track Bike Stationary
Impendulo Esheshayo: Ingabe i-Fitbit Inpire Track Cycling
Post Previous: Umbuzo: Kungani Umjikelezo Wedwala Ubizwa Nge-Cycle
Post Next: Umbuzo: IzoHlela I-B Mess Up Cycle Yakho